Shiinaha Gawaarida Tooska ah ee Sawirka Wajiga Sawirka iyo soosaarayaasha | Chaoyue
Tooska ah silig sawir daal dhinta badanaa waxaa loola jeedaa noocyo kala duwan oo silig silsilad sawir ah u dhinta, iyo sidoo kale jiidista sawirka sawirka dhinta. Dhammaan sawirrada dhimashadu waxay leeyihiin dalool bartamaha qaab gaar ah, wareegsan, laba jibbaaran, octagonal ama qaab kale oo gaar ah. biraha waxaa laga soo jiidayaa daloolka dhimashadu wey yaraanaysaa, xitaa qaabkiisuu isbeddelayaa. Dhimashada birta ah ayaa ku filan in lagu sawiro biraha jilicsan sida dahab iyo qalin Dhimashadu waxay yeelan kartaa godad badan oo kala duwan.
Sawirka siliggu wuxuu u dhintaa si ballaaran, sida elektarooniga, radar, iyo TV, aaladaha iyo silig saxsan oo aad u sareeya waxaana loo isticmaalaa aerospace iyo tungsten kale oo badanaa la isticmaalo, silig molybdenum, silig bir birta ah, silig iyo silig xarig ah iyo dhamaan noocyada SiDou ee leh daawaha dhinta waa la soo baxaa, dheemanku wuxuu u dhintaa koronto dabiici ah sida maadada ceyriinka ah, oo leh iska caabin xirasho xoog leh, adeeg sare.
Sawir gacmeedka dhinta wuxuu u qaybsan yahay dhinta birta daawaha ah, u dhinta dahaarka adag, dheeman dabiici ah oo dhinta, dheeman polycrystalline dhinta, dheeman CVD ayaa dhinta iyo dhoobada dhintaan. Horumarka qalabka cusub waxay si weyn u kobcinaysaa kala duwanaanta arjiga dalabka siligga dhinta wuxuuna hagaajinayaa nolosha adeegga silig sawiro dhinta
d1: dhexroor silig
d2: dhexroor Tungsten ama Dheeman Dheeman
d3: Sawir gacmeedka dhexroorku wuu dhintaa
l3: Meel muhiim ah
h2: Fikirka Tungsten ama fikirka Dheeman
H3: Sawirka siliggu wuxuu u dhintaa fikirka
HSS + Dheeman
Cabbirka Jaangooyada: 1 Pcs.
Habeyn: 2 kumbiyuutar.
Waxaan ku siin karnaa 1Pcs tusaale ahaan si aan u hubino cabbirka iyo tayada baaritaanka, laakiin waa inaad bixisaa kharashka iyo qiimaha rarka.
Hore: KO PIN BILAW DHIMAN PIN
Sawir-qaadista Carbide Dhimashada
Sawirka Dheeman Dheeman